अबको प्रेस विज्ञप्तिमा यो पनि भनिदेउ सरकार !! – Nepal Reports
अबको प्रेस विज्ञप्तिमा यो पनि भनिदेउ सरकार !!
ओहो कति सम्म जोडी मिलेको , जनता सामाजिक दूरी बिर्सदै छन् , सरकार सामाजिक दायित्व । जनता कोरोनासँग डराउन छोड्दै छन् , सरकार आफ्नो जिम्मेवारी बाट डराएर भाग्दै छ । यति पनि जोडा मिलेन भने त जनताको सरकार के जनताको सरकार ।
Blog By Uttam Rimal
सरकारको नयाँ नालायकीपन , कोरोना सङ्क्रमितले आफै उपचार गर्नुपर्ने रे ! होम आइसोलेशनमा मृत्यु भए आफै शव व्यवस्थापन गर्नुपर्छ रे ! थाहा छैन जनताले घरमा मान्छे मरेपछि शव व्यवस्थापन गर्न माक्स ,पी.पी.ई. , पञ्जा आदि किन्न जाने हो की नत्र अब मर्नसक्छ भनेर पहिल्यै सबै किनेर तयारी गरीबस्ने हो । अबको प्रेस विज्ञप्तिमा त्यो पनि भनिदेउ डियर स्वास्थ्य मन्त्रालय ।
अस्पतालहरूमा बेड पाईन छाडिदै छ , कोरोनाले देशलाई च्याप्दै छ , देश सङ्क्रमित संख्या प्रतिशतको आधारमा अगाडिबाट सातौं नम्बरमा आइपुगेको छ । कुल संक्रमण सङ्ख्याको आधारमा यति सानो देश ३५ नम्बरमा आइसकेको छ। डाक्टरहरुले स्तिथि गार्हो भइसक्यो भन्दै डराइरहेका छन् ।
यस्तै अवस्थामा सरकारले सांसदलाई दशैं भत्ता खुवाएको समाचार आउँछ , अनि होम आइसोलेसनमा मृत्यु भए परिवारले नै शव व्यवस्थापन गर्नुपर्छ सरकारले सक्तैन भन्दै सरकार बोल्छ ।
थुक्क कस्तो शासक छानिएछ भनेर टाउकोमा हात पुर्याउन नभ्याउँदा नभ्याउँदै अर्को समाचार बाहिरिन्छ । माननीयहरुले उपचार भत्ता भनेर बिल पेश गरेर लगभग १३०० देखि लाखौं रुपैयाँसम्म देशको ढुकुटीबाट लिइरहेका छन् । ल ठिकै छ , मानविय हिसाबले पनि जनताले उपचार खर्च लिँदा केही नबोली आफ्नो चित्त बुझाउन खोज्छन् ।
तर होइन सरकारलाई जनताको नजरमा गीर्नु नै छ ! आफ्नो नालायकीपन सबैलाई देखाउनु नै छ ! लगत्तै सरकार भन्छ - अब कोरोना सङ्क्रमितले आफ्नो उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्छ ।
कति उदार , कति ठूलो मन , कति धेरै माया !! जनतालाई सरकारको अनि सरकारलाई जनताको । म झण्डै बेहोस भाको ।
अब धेरैको त सरकारले उपचार नै गर्दैन , जसको गर्छ सायद मरेपछि मात्रै गर्छ होला किनकी मलाई थाहा छ मेरो देश कति छरितो छ। समयमा पी.सी.आर. गर्न नपाएर मानिसले ज्यान गुमाएको ठाउँमा सायद अब पी.सी.आर. गर्न नै खै के के प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । पक्कै म गरीब हूँ भन्दैमा मेरो निःशुल्क उपचार हुँदैन अनि जबसम्म हाम्रो निकायबाट म गरीब हूँ भन्ने प्रमाण आइपुग्छ म गैसक्छु । त्यसपछि सरकार सायद मेरो लासलाई उपचार गर्दै बस्छ होला । लासमाथि थोरै उपचार अनि धेरै भ्रष्टाचार !!
सरकारको कामलाई नकारात्मक रूपमा मात्रै कति हेर्ने ? एकपटक सकारात्मक पनि सोचौं होला ।
देशलाई धेरै माया गर्ने नेपाल सरकारले कोरोना परीक्षण गर्दा देशको ढुकुटी रित्तिन लाग्यो भन्दै अब जनताले आफ्नै खर्चमा कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने बताइदियो । लाग्दैछ मेराे देशका शासकले कुनैदिन छिट्टै जनताको खाली खल्ती देखेपछि भन्नेछन् अब कर तिर्नु पर्दैन , आफैसँग राख्नु ।